सपना समृद्धि, लक्ष्य र गन्तव्य ः परिणामुखी अपेक्षा
प्रकाशित मिति : Sat-20-Jun-1018
मुलुक निर्माणको अभियान चलिरहेको हल्ला आम नागरिकको दैनिकी जस्तै बन्न पुगिरहेको छ । घरमा समाचार सुनोस अखबार पढोस् चिया पसल देखि राजनीतिक दलका कार्यक्रम सम्म सुनिने कर्णप्रिय वाक्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सुनिन्छ । यस वाक्यको धरातलमा उभिएर गहिराई सम्म घोरिने हो भने हरेक मानसपटलले सकारात्मक भाव राख्दछ । मुलुक राजनीतिक क्रान्तिले अक्रान्त भई सकेको छ । २००४ साल देखि विभिन्न निरङ्कुशताको विरुद्ध प्रजातन्त्र र गणतन्त्र नेपालका लागि लड्दै आएका तमाम नेपालीहरूले वर्तमान समय सम्म आइपुग्दा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेको छ । जनताले संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गरिसकेका छन् । तिनै निकायमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरू कार्य गरिरहेका छन् । मुलुकमा बामपन्थी पार्टीले दुई तिहाईको सरकार बनेर आफ्नो मधुमास पुरा गरिसकेको छ । जनताको आशा र भरोसा केन्द्रबिन्दु वर्तमान सरकार सँग भरपुर विश्वास रहेको देखिन्छ । यस सरकार प्रति जन समर्थन व्यापक रहेको छ ।
संसदमा दुईतिहाई को सरकार सशक्त र बलियो छ । यो बलियो सरकारले जनताका इच्छा चाहनाहरू शताब््िदयौ देखिको बेथिति, हटोस्, महंगी हटोस्, भ्रष्टाचार हटोस्, जनताले न्याय माग्न पद र शक्तिकेन्द्रमा धाउन नपरोस्, बालबालिकाले बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गरोस्, वृद्धहरूले आर्शिवाद प्रदान गर्ने वातावरण बनोस्, जनताले आफु सुरक्षित भएको अनुभुति गर्न सकुन्, युवाहरूलाई बेरोजगारी समस्याबाट मुक्त गरोस्, गाँस, वास, कपासको ग्यारेन्टी गरोस् व्यवसायीहरूको व्यवसाय गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरोस्,मुलुकमा गुण्डागर्दी र बेथितिको अन्त्य गरोस्,विधिको शासन लागु गरोस्,बाटा घाटा पुल पुलेसा निर्माण गरोस्,हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न नपरोस्,स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरू सर्वसाधारणको पहुँच सम्म पुगोस्, शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनोस्,घर–घरमा दक्ष प्राविधिक उत्पादन हुन सकुन आदि इत्यादि जनताले वर्तमान सरकार सँग अपेक्षा र भरोसा गरिरहेका छन् । राज्यले यस्ता प्रकारका जनताको इच्छा आकांक्षाहरू लाई कुन कुना बाट र कहिले प्रारम्भ गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । परिणाममुखी वातावरण सकारात्मक ढंगले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? आम नागरिकहरू पर्ख र हेरको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । सकारात्मक सोच र गन्तव्यमुखी परिणाम हात पार्न मुलुक भित्रका आम शक्तिहरू सकारात्मक हुनु जरुरी छ । सकारात्मक गराउनु जरुरी छ । यो सरकारको लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेका छन् । मुलुक विस्तारै–विस्तारै आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा उत्रिएको छ । राजनीतिक योद्धाहरूले विजय प्राप्त गरिसकेका छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणका खाकाहरू कोरिन लागेको यत्रतत्र सर्वत्र सुनिन्छ । जनताका अति आवश्यकिय आवश्यकता तर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिदैन । महंगी दिन प्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । यातायातको सिन्डिकेट तोडियो भनिए पनि सवारी नियम पालना गर्ने गराउने तर्फ सम्बन्धित निकाय गन्तव्य हिन देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्र संक्रमणकालिन अवस्थामा लरबराई रहेको छ । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भएका कारणले लोकको हितमा राज्य लाग्न सक्नुपर्दछ । आशाका भारी बोकेर केही विकास निर्माण पाउने आशामा जनताहरू सरकार तर्फ हेरिरहेका छन् । मुलुकको बजेट भाषणले सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा आम जनताहरूले गरिरहेका छन् । परिणाम के ल्याउँछ त्यसले भावी दिनहरूले पुष्टि गर्ने नै छ । पछाडि फर्केर हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले ल्याएका उपलब्धिहरू कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ ।
आकाशबाट नेपाल भित्रिने हवाई रुटको थप मार्ग प्रशस्त नभई थोरै भएपनि उपलब्धि हात पार्दै गएको हो कि ? जस्तो जनतालाई भान पर्न थालेको छ । या भारतले नेपाल लाई डमरु बजाएर नचाउन खोजेको हो ? त्यो समयले पुष्टि गर्दै जाने नै छ । प्रधानमन्त्रीको अर्को छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण तय भएको छ । एजेण्डा तय भएका छन् । चीन सँग सरकार र जनताको ठुलै अपेक्षा देखिन्छ । चीनले आफ््ना योजना भित्र नेपाललाई राख्यो भने यो दुई तिहाईको सरकारलाई विश्वास गर्न सक्यो भने पक्कै पनि मुलुक निर्माणको यात्रामा राम्रै सारथी हुन सक्ने छ । रेल सेवा र विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने नेपालले खरिद गर्ने सामग्रीमा कर छुट जस्ता विषयमा चीनले साथ दिएमा कृषि ,रेलसेवा लगायतका विगतका सम्झौताको मुर्त रुप दिई दु्रत गतिमा कार्य आरम्भ हुन सक्छ कि सक्दैन ? सकेमा प्रधानमन्त्री ज्यूले देखेको सपना विपनामा परिणत हुने र मुलुकमा सम्वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने आशा अपेक्षा आम नागरिकले गरिरहेका छन् । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विद्युतीय यातायात, विद्युत उत्पादनमा जोड र नेपालबाट चीन निर्यात गर्न सकिने सामग्रीको पहिचान गरी निर्यातमा जोड दिन सक्नुपर्दछ । बन्द भएको तातोपानी नाकालाई पूर्ण पूर्ववत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि ठोस पहल कदमी थालीनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । चीनबाट आउने स्याउलाई सहज रुपमा व्यवस्थापन गरी सर्वसुलभ बनाउनु पर्छ । नेपालको उत्पादित वस्तुलाई सहुलियत र चुस्त बजारीकरणको खाँचो रहेको छ । नेपालका उद्योगी, व्यवसायी र नीजि क्षेत्र सँगको साझेदारीमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याई मुलुक लाई समृद्ध बनाउने जग बसाउन मुलुकको व्यवधान मुखी प्रकृया लाई सरलिकरण गरिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले मुलुकको समृद्धिको सपना देख्नु भएको छ । सपना हरेक नेपालीको मन भित्र रहन सकोस् । मन भित्र रहन विकास निर्माण र अपनत्व नै हो । लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिको दृढ संकल्प हुनुपर्दछ । सपनालाई लक्ष्यमा परिणत गरी गन्तव्यमा चुम्नका लागि अग्रगामी फट्को मार्नै पर्दछ । लक्ष्य अनुसारको गन्तव्यका लागि सकारात्मक सोच,लोक कल्याणकारी विधि र पद्धतिको विकास गर्दै परिणाम तर्फ मुलुक अगाडि बढ्दै जानु पर्दछ ।